Ny tahirin-kevitra voalohany amin'ny Xiaomi Mi Band 3 dia tafaporitsaka | Androidsis
Xiaomi dia iray amin'ireo marika malaza sy mahomby indrindra amin'ny tsenan'ny entina entina. Ny vokatra toy ny Mi Band-ny dia manana an'io fahombiazana io. Ny marika sinoa dia miomana amin'ny Mandrosoa amin'ity taona ity ny Xiaomi Mi Band 3, ny taranaka fahatelo amin'ireny bracelet ireny. Hatreto tsy mbola nisy fantatra ny momba ilay fehin-tànana, fa ny angona voalohany kosa vao nasiana.
Ny fehin-tànana faharoa an'ny marika dia amidy tsara, ka ity Xiaomi Mi Band 3 ity dia manana bara avo be. Noho izany, misy zavatra andrasana vitsivitsy manodidina azy. Ankehitriny, noho ny vaovao izay navoaka, afaka mahazo hevitra tsara momba izany isika.
Nanamafy ny tale jeneralin'ny orinasa fa eo am-pamolavolana ny Xiaomi Mi Band 3. Ankehitriny dia manana ny sarin'ny boky fehin-tànana izahay, izay ahitantsika ny sasany amin'ireo fiasa miandry antsika ao. Ity boky torolalana ity dia mifanentana amin'ny fampiharana FitBit 3.3.0.B
Ny fantatsika hatreto dia ny fehin-tànana vaovao dia hanolotra fampandrenesana momba ny toetr'andro, ankoatry ny fananana fampahalalana mivelatra amin'ny efijery. Inona koa, ho lehibe kokoa ny efijery ary misy vahaolana avo kokoa noho ny an'ny Xiaomi Mi Band 2. Na dia mbola tsy fantatra aza ny habeny marina.
Misaotra ny bokotra capacitive an'ny Xiaomi Mi Band 3 hahafahantsika mifindra eo amin'ireo menus samihafa. Ho fanampin'izany, fihetsika vaovao no hampidirina ao amin'ny atin'ny bracelet. Ka ny mpampiasa dia hanana safidy safidy fitetezana bebe kokoa. Zavatra mety hahatonga ny fitetezana somary sarotra kokoa ho an'ny mpampiasa.
Hatreto tsy mbola fantatra izay daty mety hanehoana ny fehin-tànana. Ny zava-drehetra dia manondro fa ho tsara kokoa noho ny taranaka faharoa. Na dia tsy maintsy miandry aza isika mandra-panamafisan'i Xiaomi rehefa hamely ny tsena izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Sivana ny angona voalohany an'ny Xiaomi Mi Band 3
Ny ekipan'ny OnePlus miaraka amin'i Disney indray dia handefa fanontana manokana amin'ny sarimihetsika Avengers farany
Voamarina: ny Galaxy S6 dia tsy handray Android Oreo amin'ny farany